Ogoow Waqtiyada Ay Xirmayaan Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Qaarada Yurub.
Home Horyaalka France Ogoow Waqtiyada ay xirmayaan Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee Qaarada yurub.
Waa halkaan kusoo gudbineynaa waqtigayada la xiri doono suuqa kala iibsiga ciyaartoyda taas oo ah maalinta ugu dambeysa ee la xiri doono Suuqa Jilaalka oo sanadkaan lagu kala qaadan xidigo badan Naadiyada Yurub oo dhan waxay ka shaqeynayaan sidii ay ku heli lahaayeen Xidigo magac ku leh aduunka isla markaana wax ka bedeli kara kooxdooda.
Premier League wuxuu siin doonaa kooxaha waqti badan si ay heshiisyadooda u fuliyaan iyagoo daaqadda ka dhigaya mid furan ilaa 23:00 (GMT).
Waxyaabaha caadiga ah waxa kamid in ay wadahadalada socon karaan habeenkii Saq dhexe Haddii ay jiraan heshiisyo la gaaray waqti dambe heshiiska ciyaaryahan wuu dhaqan geli karaa kooxuhu waxay u gudbin karaan warqad heshiis Premier League si ay u siiyaan waqti dheeri ah si ay waraaqaha u saxiixaan.
Liverpool ayaa ku dhibtooneysa inay la soo saxiixato labo daafac dhexe halka Manchester United ay ku rajo weyn tahay inay iska iibiso qaar ka mid ah ciyaartoydooda, marka waxaa hubaal ah inay jiraan waxyaabo badan oo kaa dhigaya inaad madadaasho ilaa ay daaqadda ka xirmayso.
Kooxaha ku sugan Spain waxay heli doonaan daqiiqad kasta oo ugu dambeysa maalintooda si ay heshiisyo u fuliyaan. Kooxaha La Liga ayaa heli doona ilaa hal daqiiqo ka hor saqda dhexe si ay u soo gabagabeeyaan ganacsigooda, kaasoo GMT ka arki doona daaqaddooda oo ku dhow 22:59.
Taasi micnaheedu maahan in saxiixyadu ay joogsan doonaan caawa, si kastaba ha noqotee. Barcelona waxaa laga yaabaa inay dhaawac ku dhacdo dhowr toddobaad gudahood oo ay go’aansato inay u baahan yihiin saxiix deg deg ah si ay u ugaarsadaan ciyaartoyga ugu fiican kooxda si ay u sii socdaan. Waana qaabkii ay kusoo qaateen Martin Braithwaite.
Horyaalka Serie A Waxaa uu xirmi doonaa19:00 taas oo ah waqti caqli gal ah inay ogaadaan in wax walba la sameeyo waqtigii loogu talagalay kuwa ku lugta leh inay helaan saxiix waxa ay heli doonaan hurdo wanaagsan habeenkii marka wax walba ay dhacaan oo la sameeyo heshiisyo.
Waxaan aragnay AC Milan oo la soo saxiixatay ciyaartoy bidix, midig iyo bartamaha jiilaalka – ma jiri karaan wajiyo cusub oo San Siro ah imaan doonan Suuqa bisha Janaury.
Ma jirto koox heysata waqti badan Jarmalka maanta Haddii koox Bundesliga ah ay doonayaan inay la soo wareegaan ciyaaryahan, waa inay ku dhameystaan 17:00.
Waqtigaas wuxuu muhiim u noqon karaa kooxaha raadinaya inay ka iibsadaan Jarmalka sidoo kale. Liverpool ayaa xiiseyneysa daafaca dhexe ee Schalke Ozan Kabak, laakiin waa la sii deyn doonaa kaliya hadii kooxda Jarmalka ay heli karto bedel waqtigaas.
Sida Bundesliga, Ligue 1 ayaa sidoo kale ka codsaday 20ka koox inay wax walba xalliyaan Inta aan lagaarin 17:00.
Mid ka mid ah heshiisyada ugu waa weyn ee France ayaa ku lug yeelan kara daafaca dhexe ee Barcelona Jean-Clair Todibo, kaasoo la rajeynayo inuu ka gaabiyo amaahdiisa Benfica si uu ugu biiro Nice.
Qaadashada ereyga ‘maalinta kama dambaysta ah’ macno ahaan kooxaha Scottish-ka waxay lahaan doonaan 24-ka saacadood oo buuxda si ay u saxeexaan saxiixyadooda ka hor inta uusan daaqadda xirmin 00:00.
Celtic ayaa raadineysa daafac cusub, iyadoo ciyaaryahanka Everton Jonjoe Kenny uu ku jiro liiska rajooyinka, waana inay heystaan waqti ka badan oo ku filan oo heshiiska lagu dhammeeyo.
Previous articleArteta oo amaan kala duldhacay David Liuz.
Next articleLeicester, Newcastle iyo Southampton oo dhamaantood doonayaan in amaah ay ku helaan Ainsley Maitland-Niles